Qorshe loogu magac darey Iswiidhen dalkii cubaa ee cunnada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Vadim Ghirda/Scanpix
Qorshe loogu magac darey Iswiidhen dalkii cubaa ee cunnada
La daabacay fredag 1 mars 2013 kl 15.01
Miisaaniyad kor u dhaafeeysa hal bilyan oo koron ayaa lagu kharash-gareeyey degmooyin iyo tuulooyinka qorshe bilowwday afar sannadood hortood iyadoo loogu magac-darey - Dalkii raashinka, balse aaney muuqan wax saansaan la taaban karo wax-tarkii miisaaniyaddaa.
Qorshahaa oo ka koobnaa qeybo kala duwan ayaa qaar ka mid ah war-bixinno laga sameeyey aaney suurtagal ahayn cabir iyo qiimeeyntooda, sida uu qabo Göran Hallin, oo ka mid ah mulkiileyaasha shirkadda saadaalinta ee Kontigo.
- Waxa halka ka muuqda waa gool la dhigtay ee rabitaan la qabey oo guud. Tusaale ahaan goolka ahaa kobaca tuulooyinka iyo in la abuuro goobo shaqo ee 20 000 gaarsiisan iyo wixii la mid ah. Xaqiiqdii waa goolal sarsare ee aan lagu saameeyn karin tallaabooyin siyaasadeed ee la qaado., sida uu sheegay.
Qorshaha Dalkii cunnada ayaa socon doona illaa iyo sannadka 2020, midkaasina oo lagu daah-furey xayeeysiin caalamiya ee dalkan loo sameeyey iyo inuu yahay "dalka cusub ee cunnada" iyo sidii loo hor-marin lahaa hoowlaha cunnada ee dalka gudihiisa. Intii lagu guda jirey toddobaadkan ayaa sida ku cad war-bixin 160 bog ah ee la soo ban-dhigey lagu qeexey habka miisaaniyadda bilyanka ah loo isticmaaley iyo guulaha laga gaarey, halka dhanka kale ay adag-tahay xaqiijinta in hor-u-marka la gaarey ugu wacan yahay qorshahan. Tusaale ahaan wey adag tahay in la xaqiijiyo inuu qorshaha dalka cunnadu sabab u yahay kobaca tirada kawaannada yaryar ee xoolaha lagu qalo iyo inuu sabab u yahay hoowlaha dardar-gelinta ee hayadda cunnada, Livsmedelsverket ama ururka beeraleyda LRF. Shakiga ayuu sabab u yahay in aaney waadix aheyn goolal u degsan qorshaha dalka raashinka, sida uu aamin-san yahay Göran Hallin kana mid ah mulkiileyaasha shirkadda saadaalinta ee Kontigo:
- Way ka weanaag-sanaan lahayd in la dhigto ama lagu howl-galo goolal mucayin ah ee la xaqiijiyey. Maxey yihiin goolalka dhabta ah oo aan hoowlahan ku hiigsaneeyno? Iyo inaan tooshka lagu ifin oo keliya goolalka guud, siday iminka tahay.
Dhanka kale Eskil Erlandsson, wasiirka hor-u-marinta miyiga ayaa sheegay in qorshahan guul laga gaarey iyo inuu gacan ka geeystay in dalka maanta ka soo if-baxeen kor u kaca 10% shirkadaha adeegga cunnada iyo dhoofinta cunnada ee dibadda loo iib-geeyo, isagoo intaa raaciyay in loo baahan yahey sidii dib u habeeyn loogu sameeyn lahaa qeybo ka mid ah qorshaha:
- Qeybo ka mid ah qorshahaa si ka duwan ayaan u qaabeeyn laheyn haddii maanta la dhgi lahaa. Tusaale ahaan qeybta dhabba-tuska Michelin oo aan iminka dalka oo dhan ku baahin. Waana sababta aan iminka ugu qiimeeynta ugu sameeyneyno sidii aan u eegi laheyn waxyaabah noo qabsoomey iyo sidii aan uga sii hagaajin laheyn mustaqbalka, sida uu sheegay wasiirku.